परफेक्ट पट रोस्ट (यति टेन्डर र रमाईलो!) - व्यंजनहरु
टूना पुलावको साथ के सेवा गर्ने
उत्तम पॉट रोस्ट
हरेक घर कुकमा ग्रेभी, गाजर, र आलुको साथ भाँडो भाँच्नको लागि क्लासिक नुस्खा हुनुपर्दछ!
यो सजिलो रेसिपी शुरुआतीहरूको लागि उत्कृष्ट हो र हरेक पटक अविश्वसनीय परिणामहरू दिन्छ! चक रोस्टहरू गोमांसको सस्तो कटौती हुन् जुन ओभनमा केही घण्टाको लागि कम तापक्रममा पकाउँछन्। उत्तम खानाको लागि एक मुट्ठी शाकाहारी र केही स्वादिष्ट जडीबुटीहरू थप्नुहोस्।
जस्तै मिसिसिपी भाँडो भुन जुन ढिलो कुकरमा बनेको छ, यो भाँड भुट्टी भट्टीमा बनाईन्छ, तर भाँडो भुनी पनि हुन सक्दछ तत्काल भाँडामा बनेको यदि तपाइँसँग एउटा छ भने!
कुनै भाँडामा भाँडो पोष्ट तत्काल मनपर्दछ! केवल सँगै राख्नको लागि मात्र यो सजिलो छैन, तर यसले ठूलो भाँडो भुनेको स्यान्डविचलाई बाँकी रहेको रूपमा बनाउँदछ, वा र्‍याप वा पिटामा छोड्दछ। यो हार्दिक र हृदयस्पर्शी रेसिपी माथि सेवा गर्नुहोस् मसलेको आलु र को एक पक्ष संग घरेलु लसुन रोटी ।
भाँडा पोष्ट भनेको के हो?
यो एक पाक क्लासिक र राम्रो कारणका लागि हो!
भाँडा पोष्ट एक गाईको भुुन हो जुन सामान्यतया कडा हुन्छ। लामो समयको लागि कम तापक्रममा पकाउँदा कडा संयोजी ऊतकहरू टुक्रिन्छन् र यसको फलस्वरुप स्वादपूर्ण ग्रेवीको साथ स्वादिष्ट कोमल गोमांस हुन्छ।
भाँडा पोष्टको लागि राम्रो विकल्पहरूमा चक भुनी (मेरो मनपर्ने विकल्प), एक राउन्ड रोस्ट वा एक रम्प रोस्ट पनि समावेश छ
मासुलाई हेरचाह गरिएको छ, गाजर, प्याजले घेरिएको छ, र जडिबुटीहरू र मसलाहरूको टु .्गिएको मिश्रण र बेक गरिएको छ जब सम्म तपाईंको मुखमा निलिदैन।
एक भाँडो भुनी कसरी पकाउने
SEAR प्यानमा तेल थप्नुहोस् र तेलमा खोजी चक रोस्ट (बेकन ग्रीस राम्रो छ यदि तपाईंसँग छ भने!) सबै पक्षमा खैरो नहोउन्जेल।
BROTH थप्नुहोस् भुनाको वरिपरि प्याज राख्नुहोस् र रक्सी, शोरबा, रोजमेरी, र थाइम थप्नुहोस्। एक उमालेको मा ल्याउनुहोस् र त्यसपछि ओभनमा दुई घण्टा बेक गर्नुहोस्।
VEGGIES थप्नुहोस् आलु र गाजर थप्नुहोस् र आलु कोन्डर नभएसम्म बेक गर्नुहोस्, लगभग दुई घण्टा। तेज पात हटाउनुहोस्।
सर्भ गर्नुहोस् भुनीलाई सानो टुक्रामा काट्नुहोस् वा दुई काँटाको साथ काटेर सेवा दिनुहोस्।
एक भाँडो भुनी पकाउन कति लामो
यो नुस्खा एक सामान्य चक भुनीमा आधारित छ, लगभग 4lbs (दिनुहोस् वा लिनुहोस्)। कुनै कडा टिशू भत्काउन बर्तन भाँडा उत्तम समयको लागि कम अवधिमा पकाइन्छ।
L--3. h घण्टाको लागि llb भुनी पकाउनुहोस्
L.-4--4 घण्टा को लागी एक llb भुनी पकाउनुहोस्
L.-5- h घण्टाको लागि एक llb रोस्ट पकाउनुहोस्
भुनिएको समयको आधारमा कुक समय फरक हुन सक्छ। काँटाले पोष्ट गर्नुहोस्, यदि यो कडा छ भने, भुनी शायद बढि समय चाहिन्छ खाना पकाउनु। यसलाई पछाडि छोप्नुहोस् र यसलाई पकाउने क्रममा रहनुहोस्।
कसरी भाँडा पोष्ट ग्रेवी बनाउने
यो ग्रेवी सुपर सरल र केवल स्वादिष्ट छ, केवल steps चरणहरूमा!
मसिन नहुञ्जेलसम्म चिसो पानीमा दुई ठूला चम्मच कर्नर स्टार्च। (यसलाई ए भनिन्छ घोल )।
गाईको मासु र Vegigs शोरबा निकाल्नुहोस् र एक उग्रमा ल्याउनुहोस्। तपाईंसँग लगभग दुई कप हुनुपर्दछ, यदि आवश्यक छ भने थप गोमांस शोरबा थप्नुहोस्।
गाढा नहुञ्जेल सम्म उमाल्ने ब्रोथमा स्लरीलाई ह्वास्क गर्नुहोस्।
उत्तम भुनाका लागि सुझावहरू
भुँडी छान्नुहोस् जुन यसमा धेरै मार्बलिंग छ - जसले स्वाद लिन्छ र ग्रेवीलाई बिल्कुल मुखमा पानी दिन मद्दत गर्दछ!
बेबी आलु एक राम्रो विकल्प हो। तिनीहरूलाई पीलिंगको आवश्यकता पर्दैन र आफ्नो आकार राम्रोसँग समात्छ (रसट आलु टुक्रिने गर्छन, यद्यपि उनीहरू अझै उत्कृष्ट स्वाद लिन्छन्)
गाजर काट्नुहोस् र अजवाइन अलि ठुलो भयो ताकि तिनीहरू ओभरकक हुँदैनन्
ताजा जडीबुटीहरू उत्तम हुन्छन् तर सुकेकालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, थोरै मात्र प्रयोग गर्नुहोस् किनभने सुकेका जडिबुटीहरू ताजा भन्दा बढी केन्द्रित स्वाद हुन्छन्।
ब्रोथमा २ टेबल स्पून टमाटर पेस्ट थप्नुहोस्।
मनपर्दो आरामदायक गोमांस भोजन
बीफ स्ट्यू रेसिपी
गोमांस सल्लाह र ग्रेभी
के तपाईंले यो चक रोस्ट बनाउनु भयो? एक टिप्पणी र रेटिंग तल निश्चित छोड्नुहोस्!
तयारी समय25 मिनेट कुक समय। घण्टा १० मिनेट कुल समय। घण्टा 35 मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यस भाँडो पोष्ट बिरुवा राम्रोसँग पाता गरिन्छ र कोमल तरकारीहरूसँगै प्रस्तुत गरिन्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢.- पाउन्ड चक रोस्ट वा रम्प रोस्ट
▢१ ठूलो प्याज काटिएको, वा दुई सानो प्याज
▢। गाजर २ टुक्राहरूमा काट्नुहोस्
▢दुई भाँडो अजवाइन १ ½ 'टुक्रा मा काट्नुहोस्
▢१ पाउन्ड बच्चा आलु
▢१ कप रातो रक्सी
▢दुई कप गाईको मासु वा आवश्यकता अनुसार
▢। लौंग लसुन भद्दा काटिएको
▢½ चम्मच रोसमेरी
▢½ चम्मच थाइम
He०० डिग्री सेल्सियसको लागि तापो ओभन।
नुन र मिर्चको साथ सिजन रोस्ट।
ठूलो डच ओभनमा, मध्यम-उच्च तातोमा १ चम्मच जैतून तेल तताउनुहोस्। प्रत्येक छेउमा भुटेको भुँडी नहेरी सम्म, प्रत्येक छेउमा side मिनेट प्रति छेउमा थप तेल थपियो भने।
भुनाको वरिपरि प्याजहरू मिलाउनुहोस्। वाइन, शोरबा, रोजमेरी, लसुन, र थाइम संयोजन गर्नुहोस्। भुनीमाथि खन्याउनुहोस्। तेज पात जोड्नुहोस्।
मध्यम-उच्च तातो माथि स्टोभटपमा केवल एक उकालो ल्याउनुहोस्। एक पटक श्रोम उमालेको छ, ओभर मा कभर र राख्नुहोस् र २ घण्टा बेक गर्नुहोस्।
आलु, गाजर, र अजवाइन जोड्नुहोस्, र थप २ घण्टा (4lb रोस्टको लागि) बेक गर्नुहोस् वा रोस्ट र आलु फोर्क-टेन्डर नभएसम्म।
तेज पात खारेज गर्नुहोस्। बिस्तारै मासुलाई काँटा वा ठूला टुक्रामा टुक्राको साथ ठूला टुक्रामा तान्नुहोस्। रस संग सेवा गर्नुहोस् (वा यदि चाहिन्छ भने तल ग्रेवी बनाउनुहोस्)।
चिकन नभएसम्म २ चम्मच चिसो पानीसँग २ टेबल स्पून कर्नस्टार्क जोड्नुहोस्।
भाँडाबाट गाईको मासु र तरकारीहरू हटाउनुहोस् र आराम गर्न प्लेटमा सेट गर्नुहोस्। आवश्यक भएमा अतिरिक्त शोरबा थप्नुहोस्।
शोरबालाई फोडामा ल्याउनुहोस् र कर्नस्टार्च मिश्रणमा ह्वास्क गर्नुहोस् एक पटक थोरै मोटो नभएसम्म।
नुन र स्वादको लागि मिर्चको साथ सिजन।
क्यालोरिज:579,कार्बोहाइड्रेट:२२g,प्रोटिन:47g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:१२g,कोलेस्ट्रॉल:१66मिलीग्राम,सोडियम:7 377मिलीग्राम,पोटासियम:१91। १मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:।g,भिटामिन ए:83 688383IU,भिटामिन सी:बीसमिलीग्राम,क्यालसियम:79मिलीग्राम,फलाम:6मिलीग्राम
कीवर्डसबै भन्दा राम्रो भाँडो भुनी नुस्खा, चक रोस्ट, चक रोस्ट नुस्खा, कसरी भाडा बनाउने, भाडा पोष्ट, भाँडो भुनी नुस्खा कोर्सबीफ, डिनर, एन्ट्री, मुख्य कोर्स पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।